Abiy Ahmed “TPLF waxaan gaarsiinay heer aanay halis ku noqon karin Itoobiya” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Abiy Ahmed “TPLF waxaan gaarsiinay heer aanay halis ku noqon karin Itoobiya”
Abiy Ahmed “TPLF waxaan gaarsiinay heer aanay halis ku noqon karin Itoobiya”
Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay tallaabada ay Ciidamada Federaalka kaga soo baxeen Gobolka Tigray, 28-kii bishii hore ee June.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa maanta khudbad dhinacyo badan taabaneysay u jeediyay Baarlamaanka dalkaasi, isagoona ku soo hadal qaaday dagaalka Gobolka Tigrayga.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa sheegay in dagaalku uu ahaa mid lagu khasbay Xukuumadda Addis Ababa, xilli sida uu sheegay aanay diyaarba u ahayn dagaalkaasi, isagoo intaa ku daray in xukuumadiisu ku khasbanaatay inay ka hortagto Ururka TPLF, oo halis ku ahaa buu yiri wadajirta wadanka Itoobiya iyo dalalka kale ee Geeska Afrika.
Waxa kaloo uu sheegay in dagaalka ay kaga adkaadeen TPLF, isla-markaana ay gaarsiiyeen heer aanay halis dambe ku noqon karin buu yiri Itoobiya iyo deriskeedaba. Hoggaankooda ayuuna sheegay inay tallaabo ka qaadeen, qaar badan oo ka mid ahna la soo xir xiray, kuwaa oo qayb ka ahaa dagaalka.
Abiy Ahmed, Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya ayaa xusay in dagaalkan ay dowladdu ku bixisay lacag dhan boqol bilyan oo lacagta dalkaasi ah.
Dhanka kale Ra’iisal Wasaaraha ayaa meesha ka saaray sheegashada Ururka TPLF ee ku aaddan inaanay Ciidamada Federaalka isaga bixin gobolkaasi, balse ay iyagu ku khasbeen inay ka baxaan.
“Inaga ciidamadu kalama bixin Mekelle, maalintii ay shacabka maqleen, balse muddo bil ah ayaan wadnay, ciidamadii ugu badnaana waxa ay baxeen shan iyo toban maalmood ka hor, xilligii ay doorashada dhaceysay. Shacabkana kama war hayn bixitaanka ciidamada, falaagada TPLF-na kama war hayn.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Waxaan sidaasi u sameynay waxay ahayd, si shacabka qolyaha duurka ku jira u khaldaan, oo aysan jidgooyo u sameyn, maadaama ciidamada ay wateen kumanaan gaadiid ah. TPLF waxay isku dayeen meelaha qaar in ciidamada baxaya ay carqaladeeyaan. Mekelle oo wareegii 3aad uga baxnay cidda aaminsan in ciidamada xoog looga saaray, waxaan caddeyn ahaan ugu sheegayaa laba maalmood markii ay magaaladu cidna gacanta ugu jirin in ay TPLF soo galeen.”
Hadalka Ra’iisal Wasaare Abiy ayaa ku soo aadaya, maalin ka dib markii Ururka TPLF uu soo saaray shuruudo ay ku xireen xabad joojintii uu Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ugu baaqay.
Previous articleXubno Shabaab dhaawac ah oo lagu qabtay duleedka Diinsoor
Next articleMacluumaad la xiriira ardaygii lagu dilay Jaamacadda Camuud